September 8, 2021 - Celegroup
လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းအိုးတွေပျက်ရင် လွှင့်မပစ်ကြပါနဲ့ ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပြန်ပြင်သုံးလို့ရပါတယ်
September 8, 2021 cele group 0
Zawgyi ်ဖင့္ဖတ္ရႏ္ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးေတြပ်က္ရင္ လႊင့္မပစ္ၾကပါနဲ႔ ဒီနည္းေလးအတိုင္း ျပန္ျပင္သုံးလို႔ရပါတယ္ လွ်ပ္စစ္မီးရတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ အသုံးမ်ားၾကတဲ့ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး ပ်က္စီးသြားတဲ့အခါ ျပန္ျပင္သုံးလို႔ ရတဲ့ နည္းလမ္းေလးကို မွ်ေဝေပးပါမယ္။ ေပါင္းအိုးျပစ္ခ်က္မ်ားကေတာ့Power supplyမီးအဝင္ေခါင္း အရည္ေပ်ာ္ေနတယ္။ ခလုတ္(check point)မၾကာခနတက္ေနတယ္။ ျပစ္ခ်က္ (၁)အတြက္ေအာက္ခံေႂကြသားပါတဲ့မီးအဝင္ေခါင္း ေဆာ့ကက္အထိုင္ကိုလွ်ပ္စစ္အပိုပစၥည္းဆိုင္ေတြမွာ ၅၀ဝိနဲ႔ ဝယ္ၿပီးပုံမွာျပထားသလိုလဲေပးလိုက္ရင္ေရရွည္အသုံးခံတဲ့ေခါင္းျဖစ္မယ္။ ယိုးဒယားဒယ္အိုးအနီသုံးတဲ့ေခါင္းႀကိဳးတပ္သုံးလို႔ရသြားၿပီ။ အထိုင္ေပါက္ကအတူတူဘဲ၊ နတ္ၾကပ္႐ုံပါေအာ္ရီဂ်င္နယ္သုံးေပါက္ေခါင္းႀကိဳးနဲ႔အထိုင္ေခါင္းေတြကအပူဒဏ္မခံႏိုင္ဘဲမၾကာခနအရည္ေပ်ာ္shockျဖစ္ေနတာကို အခုလို ေႂကြေခါင္းခံေပးရင္ေရရွည္စိတ္ခ်သုံးလို႔ရၿပီ ျပစ္ခ်က္(၂)အတြက္ကသာမိုစတက္ခလုတ္ေမာင္းကိုေအာ္တိုျဖဳတ္ေပးတဲ့အပူကြိဳင္ အလည္ကသံလိုက္ခလုတ္အုံcheck pointကိုလဲေပးရင္ေပါင္းအိုးမၾကာခနခလုတ္တက္ေနတာေကာင္းသြားမယ္ဒီေပါင္းအိုးကသူတို႔ကလိထားေတာ့ထမင္းက်က္ၿပီးႏွပ္တဲ့circuit ႀကိဳးေတြမပါလာဘူး။ ဒါေပမဲ့ခ်က္လို႔ရေအာင္ျပင္ေပးလိုက္တယ္။အိမ္ရွင္မမ်ားသို႔အႀကံျပဳခ်က္တ႐ုတ္ေပါင္းအိုးမ်ားဟာပစၥည္း အရည္ […]
“ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာ လိင္ ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ ညအတူအိပ္ဖို႔ေလာက္ပဲ စဥ္းစားတာကို ရပ္တန႔္ၿပီးကိုယ္တိုင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ပါ။” သူတစ္ပါးကို အားကိုးတတ္တဲ့ သာမန္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးေတြကို ရပ္တန႔္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ “မေပၚတေပၚဝတ္ထားတဲ့ မိန္းကေလး က hot ပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဝတ္စားထားတဲ့ မိန္းကေလးကေတာ့ လွပပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ… ငရဲ ဆိုတာ hot ပါတယ္။ေကာင္းကင္ဘုံကေတာ့လွပပါတယ္” […]
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ေကာင္ေလး နဲ႔ အိပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ သိေစနိုင္မယ့္ လကၡဏာ မ်ား
သင့် ဘော်ဒါ တစ်ယောက် မနေ့ညက ကောင်မလေး ချောချောလေးနဲ့ တူတူ အိပ်ခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ သိသာလွန်းနေမှာပါ။ လေလေး တစ်ချွန်ချွန်နဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ပြုံးနေမှာပါ။ ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သင့်ကိုလာပြောပြနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမ တွေ ဆိုရင်ရော?? သင်ဘားမှာတွေ့တဲ့ မိန်းကလေး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကောင်မလေး၊ Gym က ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေး၊ သူတို့ မနေ့ညက ဆက်ဆံခဲ့ရင် သင် […]
(သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်)ရဲ့အသက်(၆၉)နှစ်တွင်ဖြစ်လာမယ့်ကံဇာတာဟောစာတမ်း ဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကသေချာတွက်ချက်ပြီးဟောလိုက်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အသက်(၆၉)နှစ်တွင်ဖြစ်လာမယ့်ကံဇာတာဟောစာတမ်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ကတည်းကေနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေအားလုံးက ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ အမေစုတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် မကြာသေးခင်လောက်ကလူမှုကွန်ယက်တွင်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောစာတမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ ဗေဒင်ဆရာမတစ်ဦးမှ ဟောထားတဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လက်ရှိကံဇာတာကို သေချာတွက်ချက်ပြီး ဝေမျှပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ဟာ အသက်(၇၀)ကနေ(၈၁)နှစ်အထိရာဇအရှိန်ရှိနေပါတယ် မြန်မာပြည်အတွက်အဲ့အညံ့ကနေ လွတ်သွားပါပြီဦးဝင်းမြင့်ကတောက်လျှောက်ကိုကောင်းနေတာပါအသက်(၈၀)ကျော်တဲ့အထိပါပဲလို့ သူမရဲ့ဘဘဆရာမှအသေအချာတွက်ချက်ပြီး ဟောထားကြောင်းဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလမှာ ဦးဝင်းမြင့်မတရားအဖမ်းဆီးခံနေရတာကကံကောင်းသွားခဲ့ပါတယ် အခုလိုအဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရပါကရောဂါကြီးတစ်ခုခုစွဲကပ်နိုင်တဲ့ကံဇာတာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အတွက်ရောဂါကြီးဖြစ်မယ့်ဘေးကလွတ်ကင်းသွားတဲ့အတွက် ဘာသာရေးလုပ်ဖို့အချိန်ပိုရသွားပြီးအကုသိုလ်လည်းကင်းသွားကြောင်းဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်ပြည်သူရွေးချယ်ထားသောမဲနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟာအသက်(၈၀)ကျော်အထိအသက်ရှည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ပေးနိုင်မှာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံး စိတ်မပူကြစေဖို့ ဒီဟောစာတမ်းကိုြပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားပြောပြထားပါသေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပြည်သူတွေအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီပြီး တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့ကိုဗစ်နဲ့အာဏာရှင်လူတစ်စုကိုအနိုင်ယူပြီးနေ့ရက်တိုင်းစိတ်ခွန်အားနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ အားပေးစကားများရေးသားထားပါတယ်ခရစ်တစ်ဗေဒင် Credit unicode (သမ်မတကွီးဦးဝငျးမြငျ့)ရဲ့အသကျ(၆၉)နှစ်တွငျဖြစ်လာမယ့်ကံဇာတာဟောစာတမျး ဗဒေင်ပညာရှင်တဈယောက်ကသေချာတွက်ချကျပွီးဟောလိုက်တဲ့ဦးဝငျးမြငျ့ရဲ့အသကျ(၆၉)နှစ်တွငျဖြစ်လာမယ့်ကံဇာတာဟောစာတမျး မြန်မာနိုငျငံတွင်နိုငျငံတောျအတိုင်ပင်ခံပုဂ်ဂိုလျဒေါျအောင်ဆနျးစုကွည်နဲ့သမ်မတကွီးဦးဝငျးမြင့်တို့ကို ဖေဖောျဝါရီလ(၁)ရကျနေ့ကတညျးကေနေအိမျအကျယ်ချုပျဖြင့်ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယျ ပြညျသူတွအေားလုံးက […]
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်ရှိနေပြီး၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအနည်းငယ်မှ အားအသင့်အတင့်ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် […]
အိမ်တိုင်းမှာ အပ်တစ်ချောင်းလောက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း….
အိမ္တိုင္းမွာ အပ္တစ္ေခ်ာင္းေလာက္ေတာ့ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရင္း…. တ႐ုတ္ ပညာရွင္ေတြက အိမ္တိုင္းမွာ အပ္တစ္ေခ်ာင္း ေလာက္ေတာ့ ေဆာင္ထားသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အပ္ေလး တစ္ေခ်ာင္းကပဲ ေလျဖတ္သြားတဲ့လူနာကို ထူးဆန္းစြာ ကုသေပးႏိုင္လို႔ပါ။ ႐ုတ္တရက္ ေလျဖတ္သြားတဲ့ လူနာ ကိုေတြ႕ရင္ ဒီနည္းေလးအတိုင္း ကယ္ဆယ္ေပးလို႔ရတာမို႔ ေသခ်ာဖတ္ရႈၿပီး မွတ္သားထားၾကပါေနာ္။ လူတစ္ေယာက္ ႐ုတ္တရက္ေလျဖတ္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေတြ တျဖည္းျဖည္းျပန႔္ကားသြားတတ္ၿပီး အေရးေပၚကုသေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေလးေတြက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္ကို ကယ္ဆယ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ […]
ဘုရားရှိခိုး သူတိုင်း ရရှိမည့် ကြီးမားသော အကျိုး ၁၇ ပါး
ဘုရားရှိခိုး သူတိုင်း ရရှိမည့် ကြီးမားသော အကျိုး(၁၇)ပါး ဘုရားရှိခိုး အိပ်စက်သူတိုင်း ရရှိမည့် အကျိုး(၁၇)ပါး ဘုရား ရှိခိုး ရ သော အ ကျိုး (၁၇) ပါး ၁။ သူတစ်ပါးတို့ရှိခိုးခံထိုက်ခြင်း။ ၂။ စိတ် ၏ ရဲရင့် တည်ကြည် ခြင်း ။ ၃။ သေသည် ၏ အ ခြားမဲ့ ၌ သု ဂ တိ […]
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း (ဖတ်ဖူးတာကြာခဲ့ပေမဲ့မရိုးနိုင်တဲ့သင်္ခန်းစာလေးပါ) အမျိုးသား – ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အကြံပေး – ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ဘဝအတွက် နောက်ဆုံး ချစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ သင်သေချာလား။ အမျိုးသား – ဟုတ်ပါတယ်။ အကြံပေး – ကွာရှင်းပြီး ခုမင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ယူလိုက်။ အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ခုလက်ရှိမိန်းမက နားလည်ပေးတယ် သည်းခံတယ် တော်တယ်။ကျွန်တော်ဒီလို လုပ်ရင် သူ့အတွက် ရက်စက်ရာကျမလား။ […]
အလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်ရင် အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ်” နင့်အဖေ ဘာလုပ်လဲ နင့်အမေ ဘာလုပ်လဲ ” လို့ မေးရင် ကျွန်မအရမ်းအားငယ်ရတယ် ဝမ်းနည်းမိတယ်။” ငါရဲ့ဖေဖေက စက်ချုပ်တယ် ငါ့ရဲ့မေမေက ထမင်းချက်တယ် ” ဆိုတဲ့ အဖြေကို မရဲမဝဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြေခဲ့ရတယ်။( ” ငါ့ဖေဖေက အင်ဂျင်နီယာ ငါ့မေမေက ဒေါက်တာ ” ဆိုပြီး တချို့သူငယ်ချင်းတွေလို ဂုဏ်ယူဝဲ့ကြွားစွာ ဖြေချင်မိတယ် […]
ကားအဲယားကွန်းဖွင့်စီးသူများ လိုက်နာသင့်သည့် အချက် ၃ ချက်
ကားအဲယားကွန်းဖွင့်စီးသူများ လိုက်နာသင့်သည့် အချက် ၃ ချက် ကားအဲယားကွန်းဖွင့်စီးသူများ လိုက်နာသင့်သည့်အချက်သုံးချက်အဲယားကွန်း(Aircon)သည် အခန်းတွင်းအပူချိန်ကို စုပ်ယူလျှော့ချပေးသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဖြစ် သည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပေါ်ခါစက နေအိမ်တိုက်ခန်းများအတွက်သာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက် ပိုင်း ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှစကာကားများတွင်ပါ အဲယားကွန်းတပ်ဆင် အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ကဇိမ်ခံဆလွန်းကားများ၊ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရသော ကားအကောင်းစားများတွင်သာ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကားအကြီးအသေးအမျိုးမျိုးတွင် အဲယားကွန်းမပါသောကားဟူ၍မရှိတော့ပေ။ ကားအဲယားကွန်း၏ကောင်းကျိုးမှာပူအိုက်ခြင်းလေလုံ၍အသက်ရှူကျပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင် သည့်အပြင် မိုးတွင်းအခါမိုးရွာ၍ ကားမှန် အလုံပိတ်မောင်းသောအခါ အတွင်းမှအပူငွေ့ပြန်ပြီး […]
မိန်းကလေးတွေသတိပေးချင်လို့ ကိုယ်ချစ်လည်းမရှာနဲ့ သူချစ်လည်းမရှာပါနဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲရှာကြပါ(ဖြစ်ရပ်မှန်)
မိန္းကေလးေတြသတိေပးခ်င္လို႔ ကိုယ္ခ်စ္လည္းမရွာနဲ႔ သူခ်စ္လည္းမရွာပါနဲ႔ လူစိတ္ရွိတဲ့လူကိုပဲရွာၾကပါ(ျဖစ္ရပ္မွန္) ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းက ႏွလုံးေရာဂါ ရွိတယ္ ကေလးယူမရဘူးလို႔ ဆရာဝန္မွာထားတယ္ သူ႔ေယာက္က်ားက ကေလးလိုခ်င္တယ္ ကေလးယူေပးလို႔ ခနခနေျပာတယ္။ သူ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီး ကြၽန္မနဲ႔ေျပာျပလာတယ္ ကြၽန္မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင္ငါေရွ႕မာဆီးစစ္ျပဆိုၿပီး သူကစစ္ျပေပးတယ္။ကြၽန္မကေပ်ာ္ေလေပ်ာ္တယ္ စိတ္ေလပူတယ္ သူက က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူး ဆရာဝန္ေလကေလးယူရင္အသက္အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔မွာထားတယ္ ကြၽန္မစိတ္ပူေနမိတယ္။ကိုယ္ဝန္ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းသူေယာက်ာ္းနဲ႔ သူေျပာျပတယ္ သူေယာက်ာ္းေပ်ာ္မယ္လို႔ထင္ထားတယ္ ဘယ္ဟုတ္မလဲ ဖ်က္ခ်ဖို႔ေျပာလာတယ္။နင္ပဲလိုခ်င္တယ္ ငါရေတာ့မွ ဖ်က္ခ်ဖို႔ဆိုတာ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူးတဲ့ ကိုယ္ဝန္ရၿပီးတယ္ေနာက္ပိုင္း သူေယာက်ာ္း သူ႔ကိုနည္းနည္းေလးမွ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘူး […]
သင့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမပြတ်အောင်သိထားသင့်တဲ့ အဖိုးတန်နည်းလမ်း (၄) မျိုး တစ်လတာဝင်ငွေကို စုမိဖို့နေနေသာသာ လကုန်ခါနီးတာနဲ့ လက်ထဲငွေမလောက်တာမျိုး ကြုံကြိူက်ဖူးမှာပါ။ ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် ငွေယိုပေါက်တွေကို သေချာရှာဖွေပြီး လစဉ်စုမယ့်ငွေပမာဏကို (အနည်းအကျဉ်းဖြစ်စေ)သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ မြင်သမျှ ဝယ်ချင်နေပါက သင် တပြားမှ စုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကိုစုဆောင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် (1) ၅၀/၃၀/၂၀ နည်း -ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပေမယ့် ငွေမစုမိသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် သင့်တစ်လတာဝင်ငွေကို ၃ ပုံခွဲပါ ၅၀ရာနှုန်းကို လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် (ထမင်းစရိတ်၊ အိမ်စရိတ် ၊ဘေလ်စသည်) ဖယ်ပါ […]